Adeegga internedka ee ka maqnaa gobollada konfurta dalka oo la filayo saacadaa soo socodka inuu dib usoo noqdo | RBC Radio
Adeegga internedka ee ka maqnaa gobollada konfurta dalka oo la filayo saacadaa soo socodka inuu dib usoo noqdo
Muqdisho (RBC Radio) Wasaaradda Boostada iyo is gaarsiinta dalka ayaa maanta ku dhawaaqday in howlaha cilad bixinta adeegga internedka ee ka maqnaa gobollada koonfurta inay meel wanaagsan mareyso isla markaana ay rajeynayaan in la soo gabagabeeyo saacadaha soo socdo,sida u sheegay Eng Cabdi Canshuur Xasan wasiirka wasaaradda Boostada iyo is gaarsiinta Soomaaliya.
Markab kuwa ganacsiga ah ayaa jarey horaantii bisha xariga Fiber Optic ee adeegga internedka siin jirey gobollada koonfurta,taaso sababtay in muddo ka badan labo toddobad uu hawada ka maqanyahay adeegga.
“Howlaha cilad bixinta adeegaas ay meel wanaagsan mareyso,waxaana rajeynaynaa in la soo gabagabeeyo saacadaha soo socdo haddii uu rabbi idmo.” ayuu yiri wasiirka Boostada iyo is gaarsiinta dalka.
Warar kale oo ay caawa helayso Raxanreeb ayaa xaqiijinaya in la dhammeeyay inta badan howlaha cilad bixinta adeegga,waxaana la sugaya in uu mar kale dib usoo noqdo Internedka oo ay heleen gobollada koonfurta dalka.